Lesi sitshalo ekahle zokuhlobisa engadini noma endaweni suburban kuyinto amagilebhisi sasekhaya. Ngalo ungakwazi kalula ukunikeza ukubukeka nasici nge ngezitini odongeni noma udonga engenalutho indlu ezweni. Noma yiliphi ibhilidi ezibonakala alithandeki kuza ekuphileni phambi kwamehlo enu ngqo, lapho izindonga zalo eluka legatsha yentombazane lamagilebhisi. Ungacabangi ukuthi lokhu impahla yayo zokuhlobisa kungukuthi isiphelile. Abalimi basebenzisa izimila umhlobiso yayinamakhothamo kanye pergolas. Ngaphezu kwalokho, i-aluhlaza palmate amahlamvu amahle zalesi sitshalo kuzosiza ukudala thunzi e Gazebo elibalulekile ngakho in the hot usuku ehlobo. Ngenxa ekhethekile izimpondo amagilebhisi girlish awananyatheliswe ukwesekwa. Yenza kube lula ngokwanele.
amagilebhisi Ntombazane: lokubikezela
Lesi simila engadini emhlabeni futhi ngokuphelele linesizotha kuya izimo ezikhulayo. Ngu hardiness, izinga lokukhula, amandla namandla iziqu nge amagilebhisi sasekhaya ongancintisana Kwakungakabikho sihlahla ekuhlobiseni endaweni suburban. Ngokuvamile, i yokufakelwa imvelo umvini likhula masinyane, ngakho ngeke akwenze ngaphandle izingongolo ekhethekile nezintambo.
Abaningi akudingeki wenze umzamo ukutshala lokhu izitshalo engadini enhle kakhulu, ngoba ngempela olindele phezu amaminerali yokwakheka inhlabathi futhi ikhula kahle kunoma iyiphi inhlobo inhlabathi. Sikhula kahle ezindaweni libalele, kodwa futhi kuyelapha emthunzini.
amahlumela ngamunye kufanele itshalwe nge lamashumi imitha okungenani eyodwa emgodini lelungiselelwe of mayelana 60 cm ukujula. kungenziwa Phansi yayo wabeka amanzi ungqimba isihlabathi noma amatshe eliphukile, futhi phezu kwalo - ukugcwalisa ingxube ikhefu phansi. Lapho ukutshala amagilebhisi wentombazane uqaphele ukuthi impande zakhe collar kufanele angavuki ngaphezu komhlabathi.
Ngo eminye nokunisela ingadi isiko ayidingeki, ngaphandle ehlobo ezomile.
Ngoba okokuqala eminyakeni emibili noma emithathu lamagilebhisi yentombazane ngeke unike umqhele aluhlaza, ngoba ngaleso sikhathi kuyoba khona ikakhulu asethuthukile uhlelo impande. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi ukuqala ukukhula asebenzayo we imivini, okuyinto isikhathi esifushane amaqabunga awo wadalula opletut ukwesekwa. Isidingo kubo uzonyamalala njengoba ukubukeka izitshalo isiqu esincane sesihlahla ukuziqonda amaswidi at the amathiphu. Ngokuvamile, ngonyaka sicu abasha uyakwazi welule kumuntu ukuphakama kwamamitha amabili kuya kwamathathu. Ngakho-ke, the original kubaluleke kakhulu ukwakha umqhele yabo. Ngenxa yalezi zinjongo, ungasebenzisa abavamile engadini zokuthena imithi. Ukuze uthole ukuminyana umfaniswano izitshalo kufanele usike ezinye neziqu ukuphakama encane evela ezingeni phansi, futhi amahlumela amasha phambili endleleni efanele futhi sasibekwe esisekelweni. Into esemqoka - ukuvimbela woodiness futhi zagrubeniya Kuphendula kuze kube kulesi sikhathi. Zonke ukuqhuma extra zisuswe. Bona kumelwe unqunywe ngaphezu ihlumela, okufanele kube enempilo.
Ngemva kumiswa nemivimbo engu main usungaqala sanitary eqine izihlahla amagatsha ezilimele futhi ubudala. Uma ushiya isitshalo ngaphandle ukunakekelwa okufanele, baqina futhi sisekelwe amagilebhisi girlish jikisa amahlozi engalawuliwe oluhlaza, okuyinto ngeke ukuchaza, ngisho kanjalo kakhudlwana ukuba naye ahlakulele. Sizoba ukulufishanisa empandeni futhi uqale ezikhulayo futhi, ngakho izihlahla imisiwe isikhathi eside akudingekile.
Parthenocissus: ukukhiqizwa kabusha
Garden isiko Kulula asakaze njengoba stem cuttings bok, kanye nembewu kanye layering. Kufanelekile kulesi sikhathi sonyaka - ekwindla noma entwasahlobo.
Ungase futhi uthole amahlumela amasha imbewu. Lapho ekwindla atshale imbewu kumele ngaphansi babhekane nezinga elikhulu 3-4 izinsuku ngaphambi kokuba ibekwe enhlabathini, futhi entwasahlobo - cishe inyanga. imbewu Soaked abekwa enhlabathini aze aphakame cishe 1 cm ukujula.
Lapho esiphelweni by cuttings kungcono ukusebenzisa bok amahlumela, ngoba ukuthatha kangcono impande. Ukufika kwe-amahlumela oluhlaza - into enzima.
Orchid Ukunakekelwa transplanting, amathiphu
Top 5: melodrama zomlando